Sina 5oz saosy mafana mafana misy tavoahangy tsy misy poizina misy satrony sy dripper ary mihena ny fanamboarana sy ny orinasa | Easypack
5oz saosy mafana misy vera tsy misy tavoahangy misy vera misy satrony sy dripper ary bandy mihena
Ireto tavoahangy saosy mafana vera ireto dia fitoeran-javatra mety indrindra amin'ny kaloria homemade anao! Miaraka amin'ny tampon'ny dashboard, izy ireo dia mety amin'ny fitehirizana sy fanasana saosy mafana. Ny tavoahangy dia vita amin'ny vera mazava ary misy satroka mena / mena. Ny tavoahangy tsotra dia tena mety amin'ny fampiasana trano sy ara-barotra, ary afaka manome tsiro sy zava-manitra ho an'ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny trano fisakafoanana.
5oz saosy mafana misy vera tsy misy tavoahangy misy tavoahangy misy satrony ary fehikibo
Ny tavoahangy saosy 5 oza mazava sy satroka reducer dia fitoeran-kanina azo antoka sakafo izay sady tsara no azo ampiharina. Ny mombamomba ny tavoahangy lava sy tery dia midika fa mora ny mitantana sy mamoaka ny atiny. Mandritra izany fotoana izany, ny vera mangarahara dia mamela ny mpanjifanao hahita ireo vokatra tadiaviny hovidiana, izay tena ilaina tokoa amin'ny fiantohana ny kalitaon'ny mpanjifa! Ho fanampin'izay, ny faritra malama dia manamora ny manampy marika. Ny tavoahangy dia misy tsiranoka reducer mba hifehezana ny fizarana ny atiny.
Ny tavoahanginay fitaratra dia fitoeran-javatra lehibe ho an'ny solika, vinaingitra, saosy ary zava-manitra. Ampio fotsiny ny marika amin'ny vatan'ny tavoahangy misimisy kokoa mba hanomezana fampahalalana momba ny fampiasa amin'ny alikaola ho an'ny mpanjifanao. Raha te hivarotra ny vokatra ara-barotra ianao, ity tavoahangy ity dia azo ampiasaina any an-dakozia, trano fisakafoanana, fivarotana kafe, fivarotana lehibe sy fivarotana an-tsakafo.
3oz / 8oz koa misy
MOQ dia singa 10,000
Vita amin'ny akora vita sokay vita sokay soda avo lenta
Previous: Mpamatsy tavoahangy vita amin'ny veromanitra vita amin'ny vera manokana ao Shina
Manaraka: 32oz 1000ml fitaratra mason fitahirizana tavoahangy misy fonony vy
Tavoahangy fisotro misy vera sy siny
Ambongadiny tavoahangy ranom-boankazo
Tavoahangy soda Soda
8oz 250ml tavoahangy boribory misy vera mahitsy miaraka amin'ny ...
32oz 1000ml fitaratra mason fitahirizana tavoahangy ...
16oz 500ml siny feno masom-bava feno mololo misy kolo ...
2oz 60ml sakay mena dipoà vera mafana tavoahangy ...
25oz 750ml silinder boribory fitaratra fitehirizana tavoara ...
1.5oz 45ml Mini Hexagonal Clear Glass Jar ho an'ny H ...
Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy,